Author Topic: Waa maxay Rubella? Yaa halis ugu jira? Daawo ma leeyahay? (Read 10514 times)
« on: March 25, 2011, 09:41:26 PM »
Rubella (oo loogu yeero German measles ama Jadeecada Jarrmalka) waa infakshan fayras keeno si aada allana la isu qaadsiiyaa wuxuuna ku badan yahay carruurta wuxuuna kaloo ku dhacaa waayeelka. Waxaa dhici karta in aanu lahayn wax calaamad ah ama yeesho qandho sahlan, barar canija ah, xannuun isgoysyada ah iyo furuuruc wajiga ah kaas oo qaata laba ilaa saddex maalmood. Ka doorsashadu badanaa waa degdeg wayna dhamaataa.
Dadka ku dhasha wadamada aan bixin talaal taxane ah waxay u baahnaan karaan talaalka rubella Khaasatan dadka ku dhasha wadamada Asia iyo Afrika ayaa lagu adkaynayaa talaalka rubellaha inta aanay uurkooda u horreeya yeellan maadaama intooda badani aanay lahayn difaac.
Dhakhtarkaaga, rugta dhallaanka iyo hooyada, rugta qorshaynta qoyska, xarunta caafimaadka adeega talaalka dawlada hoose ayaa ku siin kara talaalka MMR.
Xasaasiyada - Dhibaha
Xasaasiyada talaalka MMR dhibta ka timaada waxaa ka daran dhibaatada ka timaada infakshanka rubellaha marka uur la yeesho. Waxa badanaa ka yimaadaa talaalka waxa weeye adoo dareema in aadan fiicnayn, qandho aad u hoosaysa iyo hadday dhacdoba furuuruc yimaada lix ilaa kow iyo taban berri talaalka ka dib.
Dadka la talaalay cudurka kuma fidinayaan kuwa kale.
Views: 49541 May 22, 2009, 01:41:01 PM
Views: 50013 February 05, 2008, 07:56:57 AM
Views: 45951 September 01, 2009, 02:23:15 PM
Views: 31120 May 06, 2018, 01:17:25 PM
Views: 30362 January 22, 2019, 08:47:10 PM